Aadaabta warbaahinta bulshada expression odhaahda ayaa iga dhigaysa mid xiiqsan. Waxay umuuqataa inuu had iyo jeer jiro qof iskudayaya inuu waxkastoo xeerar ah ku dabakho maalmahan oo dhan mana adkeysan karo. Dabcan waxaa jira dabeecado aan la aqbali karin khadka tooska ah iyo kan khadka tooska ah… laakiin quruxda barxadda ayaa ah in haddii aad raacdo iyo in kale aad raacdo waxa loogu yeero qawaaniinta, waxaad arki doontaa natiijooyinka. Waa kan tusaale… Waxaan raacaa bixiye emayl badan oo adeeg bixiya oo ku leh Twitter-ka oo laba jeer ayey DM i lahaan jireen
Isbedelada warbaahinta bulshada ayaa isbedelaya… laakiin ma hubo inay fulineyso ballanqaadkeedii. Iyada oo la riixayo in la helo dakhli badan iyo ka badan, waxay ila tahay aniga in kanaalada bulshada ugu caansan ee internetka ay cunayaan dhammaan dhinacyada bulshada ee barnaamijyadooda oo kaliya ay u dilaan dhammaantood inay noqdaan marinno dhexdhexaad ah oo lacag badan la bixiyo. Iyada oo leh sharafta iyo buunbuuninta warbaahinta bulshada… waxaad u malayn lahayd inay wax sidaas noqon karto
Talaado, Oktoobar 8, 2013 Sabti, Sebtember 19, 2015 Douglas Karr
Falcon Social, suuqleyda B2B waxay adeegsanayaan astaamaha balaaran sida dhex dhexaadinta, daabacaadda, iyo aaladaha kaqeyb galka si loo abuuro isku xirnaan, dhisida wacyigelin sumcad leh, aragti dheeri ah, iyo soo saaritaano hor leh oo cusub si loo wado ganacsigooda bulshada. Falcon waa qayb dhammaystiran oo dhammaystiran oo ay ka buuxaan astaamo awood u leh iskaashi kooxeed oo adag, cabbiraadda waxqabadka saxda ah, iyo ka-qaybgalka macaamiisha firfircoon. Iyagu waa kuwa ugu sarreeya 10 Horumar Suuqgeyn La Doorbiday iyo Iskaashatada Boggaga + Google+. Gaar - Raad raac kanaga